musha > Travel Europe > Best Wineries In Europe And How To Get There
yekushanyirana waini kumatunhu ari Europe hope nerimwe waini connoisseur. Zvinoshamisa kwazvo yemizambiringa, inodziya uye jeka ekunze, enchanting mujinga, uye zvokudya zvakanaka kutsanangura izvi waini pamusoro nharaunda. Kana iwe uri mudiwa wewaini uye uchida kuona Akanakisa Wineries MuEurope Uye How To Get Ikoko, Save A Train achakubatsira wasvikapo!
Verenga kuziva chii Europe ine kupa vanoda waini. Isu tinotengesa iwe ungadai wakatoirongedza mupfungwa dzako usati wapedza ino chinyorwa!
Best wineries mu Europe: Furanzi
Champagne Region, Furanzi
Vamwe zvikuru nomukurumbira uye Best wineries mu Europe inowanikwa shambeini. It is yakanaka rwendo nokuti zuva rwendo kubva Paris, asi kune vakawanda Champagne dzimba kuongorora zvose Reims uye Epernay, apo uchawana mazita nomukurumbira wakaita Veuve Clicquot uye Tattinger. The Champagne Nharaunda yakanga ichangobva zita rimwe UNESCO World Heritage Site, riri guru inobuda kuzochera Tourism kuti nharaunda, pamwe yakaisvonaka rinopfungaira kumakomo azere yemizambiringa.
Paris kuna Reims Zvitima
Paris kuna Nancy Zvitima
Metz kuParis Zvitima
Nancy kuParis Zvitima
Rhone Valley, Furanzi
The Rhone Valley waini nharaunda ine zvakawanda kupa kubva tsika pfungwa pamwe Lyon ari mumwe UNESCO World Heritage Sites. With kwayo nyore, zvechokwadi gastronomy, The Rhone iri waini anoda kuti denga pamwe yakakurumbira waini kuti Crozes-Hermitage, Cote-Rotie, uye Chateauneuf-du-Pape kudhirowa vatashanyi vewaini vanobva kutenderera pasirese.
Usafunga kutya kana uchingotaura kutsvaka nguva yakanaka nevamwe kumadhindindi zvazvo! Kubva beginners nenyanzvi, ari Rhone ndiye zvirokwazvo munhu anyorewo. Heunoi rundown pamusoro nzvimbo kuenda uye zvinhu kuona.
Lyon kuProvence neTreni
Best wineries mu Europe: Tuscany, Itari
The Tuscany wineries kupa waini akakwana nyika ruzivo. Haingori chete iyo Tuscany ine mamwe Italy kuzivikanwa kwakanyanya, kufanana idzva Val d'orcia Doc, Viini Nobile von Montepulciano, asi dunhu iri zvakare riri kuputika nekudada, rudo nyika, uye yakakura mufaro nokuudzawo vamwe.
Kana iwe haudi kuronga yako Tuscany waini kushanya, you can rely on the expertise of a guide or driver. We usually kurenda motokari uye muzviite isu, asi isu akaita kuva mutyairi voga muna Montalcino uyo akatora nesu kumativi yedu vanorega pre-akaronga. Chinhu chikuru nzira kuenda kana you`re kunetseka kutyaira munzvimbo kana uchida kunwa waini pane mate nayo.
Unogona bhuku kushanyira pachine. Tinofunga zvakanaka kuenda ane private runobudirira, sezvizvi Montepulciano rwokuparidza, Montalcino rwokuparidza, kana Chianti rwokuparidza kubva Viator.
muromo: Nesuwo zvikuru zvinoratidza achiwedzera winery zvemasikati kuti zvirongwa zvako rimwe zuva. Tuscan waini vari zvaireva kuti kunakidzwa pamwe chikafu.
Best wineries mu Europe: Mosel, Jerimani
Tose tinoziva Germany ayo doro uye mota, asi kusvikira ikozvino, we didn’t know that they have a kick-ass wine region too.
pakati Koblenz uye muganhu kuti Rukuzemubhogu nhema Germany waini dangwe nharaunda. nechekare, vaRoma akaona zvinogona mune inodziya Micro-ekunze uye inotonhorera akapfuma ivhu. nhasi, the vineyards of the Moselle region produce some of the world’s best Rieslings.
Kune vazhinji kusarudza kubva, asi panguva pamusoro yatakanyora pasi iri Weingut Willi Schaer. A wemizambiringa duku kuti yakatanga kusvika 1121. The Schafer mhuri kunyanya rinoshandisa yakadzidziswa pfungwa kuravidza vavo dumbu mupfungwa kana totaura Pakusarudza yakanaka nguva yokukohwa chikamu chimwe nechimwe mizambiringa yavo. Dzatinofunga riri badass!
Mhuri chete pave Riesling kwavo 4.2 hectares nyika ayo achishandisa zvakakwana pakati acidity uye mamiriro inozivikanwa. Iwaini inotsoropodzwa iri kugoverwa pasirese. Kana uchida ravira waini pamusoro-panzvimbo, kuva nechokwadi kuti bhuku waari kumashure.
KuCologne Bonn Zvitima
Bonn kuna Koblenz Zvitima
Koblenz kuna Bingen Zvitima
Bingen kuna muFrankfurt Zvitima
Best wineries mu Europe: Lavaux, Siwizarendi
umhare viticulture: Chinhu Mutsara kazhinji vakashandisa kutsanangura kurima kuti nharaunda yakaoma. Lavaux, Switzerland is a region that exemplifies the concept perfectly.
Lavaux munhu waini Sub-nharaunda Vaud, rakamiswa pamusoro hwokumusoro pamhenderekedzo Lake Geneva, Siwizarendi. nzvimbo iyi, iyo anopindura ane enviable nzvimbo iri kumabvazuva hafu nyanza, anozivikanwa hwokubereka steely chena waini, kunyanya kubva Chasselas mazambiringa.
kekutanga maziso ako pachigaro yaro poromoka tenuka, uri akarova nokuda impracticality kwayo zvose. (Kunyanya kuposita munhu hombodo mashomanana ewaini). Vanoonekwa UNESCO somunhu World Heritage Site, divi rakakomborerwa nezuva reLake Geneva rinomutsa runyararo marongero akazadzwa nemaruva, shimmering mvura zvitema kuti chete inogona vakwaniswe mberi negirazi omunzvimbo Chasselas. Saizvozvowo, yayo mugungwa-vachimbundirana kwokurangana kubhururuka pa kwekupedzisira slants that only a mountain goat and team should harvest.
Muzana remakore rechi11, mujinga guru izvi vaiva Benedictine uye Cistercian dzemamongi. Zvaiva mamongi vakanga akashandura aimbova chisango nzvimbo kupinda yemizambiringa zvibereko zvinoitika kuti vanyatsochinja Vistas.
Ndiro kuona kubva muchitima hwindo iri kusvika kuna wekuLausanne:
Taundi wekuLausanne anonyatsorayiridzwa rakamiswa pamugumo Lavaux. Iyo inogadzirira yakanaka maonero nzvimbo ye kuongorora nharaunda. Within Switzerland, WekuLausanne Chokwadi muridzi ruzhinji kana totaura yemizambiringa. (Dunhu racho rine nzvimbo inokura waini isiri diki pane 62 nhabvu minda, runobereka kusvika 400’000 hombodo gore negore.)
Kutsigira mabhegi ako uye akamurairawo magirazi yako. Inguva yekubata chitima kana maviri kuti uone Zvakanakisa Wineries muEurope. Save A Train inokupa iwe nekukurumidza uye isinganetsi- matikiti asina mubhadharo wakavanzika. Wakamirira chii? Nguva kuti waini yako, pamusoro!
Unoda embed yedu Blog romukova Best Wineries In Europe And How To Get Ikoko pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wineries-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#EuropeWine #TrainandWine #wineries #winetasting #winetastinginEurope europetravel waini winetour